China waya waya eriri na eriri isi ụlọ ọrụ na-emepụta | Bangyi
Eriri eriri igwe na-eji eriri waya eme ihe mejupụtara ya na eriri eriri nke dị n'etiti eriri waya nchara. Ọ bụ FC na-anọchi ya. E jiri ya tụnyere eriri igwe eriri igwe, eriri eriri igwe waya nwere ihe dị nro, njigide corrosion na nchekwa mmanụ ọzọ. E nwere 2 ụdị Fiber isi
Eriri eriri igwe na-eji eriri waya eme ihe mejupụtara ya na eriri eriri nke dị n'etiti eriri waya nchara. Ọ bụ FC na-anọchi ya.
E jiri ya tụnyere eriri igwe eriri igwe, eriri eriri igwe waya nwere ihe dị nro, njigide corrosion na nchekwa mmanụ ọzọ.
E nwere 2 ụdị Fiber isi: Natural eriri isi na Sịntetik eriri isi.
Eke ụdọ eriri igwe eriri igwe na-eji eriri eriri eriri dị ka jute, sisal, wdg.
Sịntetik isi ígwè waya eriri bụ eriri isi mere nke chemical sịntetik ihe, dị ka polyethylene, polypropylene, naịlọn, wdg a ụdị eriri isi nwere obere nchekwa mmanụ, na nchara waya waya siri ike na corrosion na-eguzogide ọgwụ.
Kedu ihe dị iche na etiti nchara na eriri eriri
1. Ngwongwo igwe nchara nchara nke otu dayameta nwere ikike na-agbaji ka ukwuu karịa eriri eriri waya, na ibu ọ na-ebu bukwara ibu;
2. Igwe igwe nchara nchara nwere mmetuta mmetụta dị mma na nkwụsi ike karịa eriri eriri waya. Ngwongwo igwe nchara bu ihe kwesiri otutu otutu winding;
3. Steel isi waya eriri dị elu karịa eriri isi waya eriri na usoro nke elu okpomọkụ na-eguzogide. A na-ahọpụta ụdọ eriri igwe na-adịkarị maka oge okpomọkụ dị elu;
4. Igwe eriri waya dị nro dị nro karịa nchara nchara nchara;
5. Lubrication nke eriri igwe na-eme ka eriri waya dị mma karịa ka eriri waya na-acha nchara nchara maka ịchekwa mmanụ.
Aha Eriri waya waya na Fiber Core
Dayameta 0.3-12mm, wdg
Ihe owuwu 6 * 7 + FC, 6 * 19 + FC, wdg.
Ogologo 500 mm / ukwu, 1000 mm / ukwu, 2000 mm / ukwu, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
Ihe onwunwe Carbon ígwè, hemp isi / owu isi / eyi isi
ike ọdụdọ 1470,1570,1670,1770,1870,1960,2160MPA
Ọgwụgwọ ihu Electro-galvanizing, ma ọ bụ na-ekpo ọkụ-itinye galvanizing
Nhazi Elu na-acha Nọmba T / S Opekempe B / L Ngalaba mkpọwa Nkebi ibu
Osote: Electro kpaliri eriri waya waya
Electro kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri,